ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR80 PVC Card ကို, ပရင့်ထုတ်ရန်အ CR90 ပလတ်စတစ်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ CR100 ပလတ်စတစ်ကဒ်
 » RFID Card ကို » ပရင့်ထုတ်ရန်အ Card ကို
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Card ကို ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR100 ပလတ်စတစ်ကဒ်, ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR100 PVC Card ကို, ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR80 ပလတ်စတစ်ကဒ်, ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR80 ပလတ်စတစ် ID ကိုကတ်, ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR80 ပလတ်စတစ်စမတ်ကဒ်, ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR80 PVC Card ကို, ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR90 ပလတ်စတစ်ကဒ်, ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR90 PVC Card ကို
ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုများ: အရွယ်အစားနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ, အထူ, IC ချစ်ပ်ထုပ်ပိုး, သံလိုက်အစင်း, pre- ပုံနှိပ်ပုံစံ, လိုဂို, ဂဏန်း, QR ကုဒ်ကို, ပုံတူ, စသည်တို့ကို.
နိုင်ငံတကာစံနှုန်း CR80, CR90, CR100 အရွယ်ရှိပလပ်စတစ်ကဒ်ကိုကဒ်ပြားပရင်တာများတွင်အသုံးပြုသည်, ပုံစံ print ထုတ်နိုင်ပါတယ်, လိုဂို, ဒါကြောင့်အပေါ်ပုံတူများနှင့်. CR80 PVC ကဒ်ကိုလည်း RFID ချစ်ပ် encapsulate နိုင်ပါတယ်, သံလိုက်အစင်း, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏စသည်တို့အားလုံးမျိုး.
Seabreeze Smart Card Co. , Ltd သည်အခြားအရွယ်အစားဖြင့်ပုံနှိပ်နိုင်သောပလပ်စတစ် PVC ကဒ်များကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR80 PVC Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ CR90 ပလတ်စတစ်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ CR100 ပလတ်စတစ်ကဒ်
prev: custom ပရင့်ထုတ်ရန်အ Blank က programmer Writable NFC ကိုကတ်
နောက်တစ်ခု: Inkjet Printer တိုက်ရိုက် Print ကို PVC အဖြူရောင်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အသံလိုက်မြှောင်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ RFID Chip Blank ကကဒ်
ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC အဖြူရောင်ကဒ်